လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် စက်မှုအရန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း (ဘီလူးချောင်း၊ ရဲနွယ်၊ ဇောင်းတူ၊ ကွန်းချောင်း) | Myanmar Tender Portal
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် စက်မှုအရန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း (ဘီလူးချောင်း၊ ရဲနွယ်၊ ဇောင်းတူ၊ ကွန်းချောင်း)
Tender ID: 12844
၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့် ရေအားစက်ရုံများဌာနလက်အောက်ရှိ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် (မြန်မာကျပ်ငွေ) ဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် (DDP At Site) ဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူလိုပါသည် -
(က) Tender No. 27/ EPGE/ 2020-2021 ဘီလူးချောင်း(၁)၊ ဘီလူးချောင်း(၂)၊ ဇော်ဂျီ(၁) ဇော်ဂျီ(၂) နှင့် ကျိုင်းတောင်းစက်ရုံများအတွက်Oil Cooler,Turbine Guide, Bearing Pad, Oil Pump, Cooling Water Pump With Motor နှင့်Air Compressor များအပါအဝင် စက်မှုအရန် ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း။(8 items)
(ခ) Tender No. 28/ EPGE/ 2020-2021 ဇောင်းတူ၊ရဲနွယ်၊ ခပေါင်းစက်ရုံများအတွက် Governor Oil Pump With Motor, Shaft seal , Air Seal ,Governor combine Valve , Brake Shoes နှင့် Submersible Sewage Pump များအပါအဝင် စက်မှုအရန် ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း။(10items )
(ဂ) Tender No. 29/ EPGE/ 2020-2021 ဘီလူးချောင်း(၁)၊ ဘီလူးချောင်း(၂) ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် DC to DC converter ,DC Power Supply , Carbon Brush Cell Bank& Charger ,Lightning Arrester Disconnecting Switch များအပါအဝင် လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စက်အရန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း။(8items )
(ဃ) Tender No. 30/ EPGE/ 2020-2021 ကွန်းချောင်း၊ ဖြူချောင်း၊ဇောင်းတူနှင့်ခပေါင်း ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက်Programmable Speed Monitoring Device ,Field Circuit Breaker , Central Processing Unit, Power Composite Panel Card, Motor for Gantry Crane ,Stepper များအပါအဝင် လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စက်အရန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း။( 11 items)
၃။ တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန် - ၁၁-၁၁-၂၀၂၀ ရက်၊ (၁၄:၀၀)နာရီ
၅။ တင်ဒါပုံစံအား ၁၂-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစတင်၍ ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပြီး တင်ဒါကြော်ငြာအား ဝန်ကီးဌာနဝက်ဆိုဒ် (www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ကြော်ငြာထားမည်ဖြစ်ပါသည်။